किन्न Fresh Fingers स्प्रे: 50% छुटको साथ गन्ध हटाउने!
Fresh Fingers डिओडोरन्ट खुट्टा स्प्रे समीक्षा
यो स्प्रे फारममा एन्टिमाइक्रोबियल डिओडोरन्ट हो, जुन अप्रिय खुट्टाको गन्ध र भारी पसिना हटाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। Fresh Fingers एक उत्कृष्ट स्वच्छता उपचार हो, विशेष गरी गर्मीमा। साथै, उत्पादन ब्याक्टेरिया र फंगल खुट्टा संक्रमण को उपचार मा मद्दत गर्दछ।
कहाँ किन्ने Fresh Fingers सबै भन्दा राम्रो मूल्य को लागी?
यो स्प्रे कस्मेटिक कम्पनी द्वारा उत्पादित छ Hendelगार्डन वर्तमानमा, यस ब्रान्ड अन्तर्गतका उत्पादनहरू केवल निर्माता द्वारा सिधै बिक्री गरिन्छ। यो रिटेल नेटवर्कमा डियोडोरन्ट खरीद गर्न सम्भव छैन, जस्तै फार्मेसी वा कस्मेटिक स्टोरहरू।
यसैले कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई जालसाजी वा घटिया उत्पादनहरुको अधिग्रहणबाट बचाउन चाहन्छ। इन्टरनेटमा कुनै पनि मध्यस्थता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू होइनन्, र उनीहरूले प्रस्ताव गरेका उत्पादनहरू खरीद गरेपछि, तपाईं ठगाहरूको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्वास्थ्य र पैसा जोखिममा नपार्नुहोस् - केवल आधिकारिक निर्माताबाट उत्तम मूल्यमा सामानहरू खरीद गर्नुहोस्।
विवरण र उपयोगी गुणहरू Fresh Fingers
मानव पसिना ग्रंथिहरूले विशेष स्राव विकास गर्दछ, जुन 99% पानी हो। बाँकी प्रतिशत विभिन्न लवण, एसिड र अमोनिया हो। पसिना आफै गन्धहीन हुन्छ, तर यदि नुन वा अमोनियाको प्रतिशत यसको संरचनामा बढ्न थाल्छ भने गन्ध देखा पर्दछ। थप रूपमा, गर्मी मा मान्छे धेरै पसिना, र यो धेरै ब्याक्टेरिया को लागी अनुकूल वासस्थान हो। तिनीहरू पनि एक विशेष गन्ध को उपस्थिति को कारण।
यदि तपाईंको खुट्टा गन्ध र अत्यधिक पसिना, यो तपाईं आफ्नो खुट्टा मा अर्को "अतिथि" छ कि एक प्रमाण हुन सक्छ - फंगल संक्रमण। तपाईं यसलाई पूल, सौना, गैर-बाँझ पेडीक्योर प्रक्रियाहरूको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सुरुमा तपाईंले माइकोसिस (फgal्गल संक्रमण) को कुनै संकेतहरू महसुस नगर्न सक्नुहुन्छ, तर अप्रिय गन्ध पहिले नै महसुस हुनेछ। त्यस्ता चरणहरूमा, रोग सजिलैसँग पराजित गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि यो उत्पादन। यो उपचार अर्को अप्रिय रोग - हाइपरहाइड्रोसिसको उपचारमा उत्कृष्ट सहायक तयारी पनि हो। यो खुट्टा र सम्पूर्ण शरीरको पसीना बढेको द्वारा विशेषता हो। यस रोगका कारण हार्मोनल डिसआर्डर, साथ साथै अन्त: स्रावी प्रणालीमा असामान्यताहरू हुन्। यस अवस्थामा एक उत्कृष्ट स्थानीय उपचार डिओडोरन्ट हुनेछ Fresh Fingers.
यदि तपाईंसँग कुनै खुट्टा रोग छैन भने, तर तातो मौसममा तपाईं सख्त पसिना बान्नुहुन्छ, यो स्फूर्तिदायी डिओडोरन्ट तपाईंको लागि राम्रो सहयोगी हुनेछ। यसको मुख्य कार्य जीवाणुरोधी हो। त्यो हो, उपचार एक अप्रिय गन्ध को मुख्य कारण संग लडिरहेको छ - ब्याक्टेरिया। यसको मतलव कडा तातोमा पनि तपाईंको खुट्टा ताजा हुनेछ। थप रूपमा, डिओडोरन्ट सुगन्धित योजकहरू मिलेर बनेको छ, जसले तपाईंको खुट्टालाई हल्का सुखद गन्ध दिन्छ।
Fresh Fingers खुट्टा छालाको रोगबाट बचाउनको लागि एक उत्पादन हो। कुरा यो हो कि यसले रोगजनक सूक्ष्मजीवहरूको विकासको लागि अनुकूल वातावरण नष्ट गर्दछ, खुट्टाको सतहमा एक सुरक्षात्मक फिल्म सिर्जना गर्दछ। यसैले, वर्षको कुनै पनि समयमा तपाइँको खुट्टा सुरक्षित छन्।
थप रूपमा, उत्पादको संरचनामा बिरूवा निकासी समावेश हुन्छ, जसले बिस्तारै खुट्टाको ख्याल राख्छ। यस प्रभावका कारण, खुट्टाको छालाले आवश्यक उपयोगी पदार्थहरू प्राप्त गर्दछ, तातोमा सुख्खा हुँदैन र चर्को हुनेछ, वा छीलो।
को रचना Fresh Fingers
स्प्रेको मुख्य सक्रिय तत्त्व चिया रूखको तेल हो। यो एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक हो।
तेल मा terpinene र सिनेल जस्ता पदार्थहरु छन्। तिनीहरू चिया रूखको पातबाट निकाल्ने एन्टि-ब्याक्टेरियल गुणहरूको लागि जिम्मेवार छन्। सामान्यतया, चिया रूखको तेलको फाइदाजनक गुणहरूमा पर्दछ: एन्टिवाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफंगल। प्राय: यो पदार्थ संक्रमित सूक्ष्मजीवहरूका तीन प्रकारका कारण हुने रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ: भाइरस, ब्याक्टेरिया र फgi्गल। पछिल्ला दुई खुट्टाको छालामा ठूलो मात्रामा उपस्थित हुन्छन्। त्यसकारण, चिया रूखको तेल खुट्टा हेरचाह उत्पादनको लागि अपरिहार्य घटक हो।
चिया रूखको तेल सधैं सामयिक उपचारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। डिओडोरन्टमा Fresh Fingers, यो इष्टतम रकममा उपस्थित हुन्छ ताकि छालामा जलन हुँदैन र अप्रिय गन्धको कारण कार्य गर्दछ।
चिया रूखको तेलको घाउ निको पार्ने र पुनर्जीवनको प्रक्रियालाई छिटो पार्ने क्षमतालाई पनि ध्यान दिंदै लायक छ। यो मात्र होइन अप्रिय वा पीडादायी संवेदना हटाउनुहोस्, तर पनि प्रभावित क्षेत्र कीटाणुरहित, मेटाबोलिक प्रक्रियाहरू स्थापना गर्नुहोस् र, यसैले, छालालाई छिट्टै निको हुन मद्दत गर्नुहोस्.
थप रूपमा, स्प्रेको संरचनामा प्राकृतिक उत्पत्तिको सुगन्धित घनत्व समावेश छ, जसले खुट्टाको छालालाई नरम रूपमा मात्र असर गर्दैन, तर उनीहरूलाई सुखद गन्ध र ताजापनको भावना पनि दिन्छ।
प्रयोगको लागि निर्देशनहरू Fresh Fingers
उत्पादनलाई खुट्टामा लागू गर्नका लागि विधि सरल छ र धेरै समय लिदैन। स्थायी परिणाम प्राप्त गर्नका लागि मुख्य सर्त - प्रक्रियालाई नछोड्नु र निश्चित प्रणाली अनुसरण नगर्न सिफारिस गरिन्छ।
यहाँ तपाईले कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने छ Fresh Fingers:
ध्यानपूर्वक आफ्ना खुट्टा धुनुहोस्, विशेष गरी तल र तपाईंको खुट्टाको बिचको क्षेत्र। इत्र बिना साबुन प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ, उदाहरणका लागि बच्चा साबुन।
नरम तौलिया क्षेत्रको साथ सुक्खा मेटाउनुहोस् जुन क्षेत्र तपाइँले उत्पादन लागू गर्नुहुनेछ।
बोतललाई हल्लाउनुहोस् र तपाईंको खुट्टामा डिओडोरन्टको पातलो र पनीर तहमा स्प्रे गर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि स्प्रेले तपाईंको खुट्टाको औंलाहरूको बीचको क्षेत्र ओगटेको छ।
स्प्रे पूर्ण रूपमा सुक्के सम्म प्रतीक्षा गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं मोजा वा लगाउन सक्नुहुन्छ जुत्ता लगाउन।
यो दिनको दुई पटक तपाईंको खुट्टामा उत्पादन लागू गर्न सिफारिस गरिन्छ - बिहान घर बाहिर जानुअघि र बेलुका स्नानपछि र ओछ्यानमा जानु अघि। यसलाई प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ Fresh Fingers लगातार तातो मौसममा, पसिना विशेष गरी प्रशस्त मात्रामा हुँदा।
को उपयोग गर्न contraindication Fresh Fingers
स्प्रेको संरचनामा, त्यहाँ केवल hypoallergenic घटकहरू छन्। सामान्यतया यो बोटका अर्कहरू हुन्, जुन नियमको रूपमा एलर्जीको प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दैन। तर त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जुन केहि बोटको अर्कामा अत्यन्त संवेदनशील छन्। तिनीहरूमा एलर्जीको प्रतिक्रिया हुन सक्छ Fresh Fingers.
त्यसकारण, उत्पादन प्रयोग गर्नु अघि, तपाईंले एक साधारण एलर्जी परीक्षण सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो गर्नका लागि, तपाईंको खुट्टामा वा तपाईंको कुहिनिको भित्रबाट केही मिनेटको लागि छालाको सानो प्याचमा केहि उत्पाद लागू गर्नुहोस्। यदि आधा घण्टा पछि त्यहाँ नकारात्मक छाला प्रतिक्रिया छैन भने, त्यसपछि तपाईंसँग एलर्जी छैन, तपाईं सुरक्षित रूपमा डिओडोरन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तर, Fresh Fingers तपाईको खुट्टामा खुट्टा घाउ छ भने प्रयोग गर्न सकिदैन। यस अवस्थामा यस उत्पादनको प्रयोग सुरू गर्नु भन्दा पहिले डाक्टरको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ।
Fresh Fingers समीक्षा
यस स्प्रेलाई केवल कस्मेटोलोजी र फार्माकोलजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले मात्र होइन तर साधारण प्रयोगकर्ताहरूले पनि गन्ध हटाउने प्रयास गरेका थिए। प्रतिक्रिया अधिकतर सकारात्मक थियो।
डायना, 25 वर्ष पुरानो
गर्मी मा, म सधैं एक अप्रिय पसिना गन्धबाट पीडित छु। हुनसक्छ मसँग केही कम्प्लेक्सहरू छन्, तर यो मलाई लाग्छ कि म गन्ध आउँछु जब म धेरै पसिना बहाउँछु। यद्यपि म स्वच्छताको नियमहरूमा अडिग छु, म प्राय: नुहाउँछु र एन्टिपरस्पिरन्ट्स प्रयोग गर्छु। म एन्टिपरस्पिरन्टको प्रयोगको साथ मेरो बगलको साथ समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको छु, तर खुट्टाले के गर्ने? मैले मेरा साथीहरूसँग मेरो चिन्ताहरू साझेदारी गरेपछि, र उनले मलाई प्रयास गर्ने सल्लाह दिए Fresh Fingers दुर्गन्ध उसको बुबाले खुट्टाको फg्गलबाट पीडित र यसलाई स्फूर्ति र उपचारको लागि प्रयोग गर्नुभयो। मैले मेरो खुट्टामा धेरै चोटि स्प्रे लागू गरें - गन्ध अचम्मको थियो। र संवेदनाहरू प्रयोग पछि सुखद छन् - छाला नरम, कोमल छ। मैले यो आफैंका लागि पनि किनें। केहि ध्यान नपाई, पसीनाले समस्याको बारेमा बिर्सिएँ। र सबै यो दुर्गन्धक को लागी धन्यवाद। मैले धेरै आत्मविश्वास महसुस गर्न थालें।
एलेक्स, 37 वर्ष पुरानो
मैले काममा ड्रेस कोड अनुसरण गर्नुपर्दछ, र गर्मीमा पनि सधैं बन्द जुत्ता र मोजा लगाउनु पर्छ। स्वाभाविक रूपमा, यसले मेरो कमजोर खुट्टाको स्थितिमा प्रभाव पार्न सक्दैन। यो रमाईलो सपना हो कि उनीहरूले तातो दिनमा कसरी पसिना बसाउँदछन्। जब म मेरो सिफ्ट पछि घर आउँछु, मोजा पूरै भिजेको र धेरै दुर्गन्ध हुन्छ। मेरी पत्नी, मेरो समस्या देखेर, मलाई खुट्टा लागि एक दुर्गन्ध किन्नुभयो। उनले भने कि कतै इन्टरनेटमा उनले यसको बारेमा राम्रो समीक्षा पढ्छन्, र को मूल्य Fresh Fingers धेरै स्वीकार्य छ। मैले यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें। मेरो जुत्ता र जुत्तामा तातोमा पसिनाले मेरो पसिना जारी राख्ने तथ्य हुँदाहुँदै पनि, मेरा खुट्टाहरू पूरै कामका दिन पछि पनि ताजा नै रहन्छन्, र उनीहरू गन्ध गर्दैनन्। यो राम्रो गन्धको साथ धेरै राम्रो स्प्रे हो, र म यसलाई सिफारिस गर्दछु।
स्प्रे Fresh Fingers अत्यधिक खुट्टा पसिना र नराम्रो गन्ध हटाउने उत्तम तरिका हो। थप रूपमा, यो उत्पादन धेरै छाला रोगहरु लाई रोक्छ ब्याक्टेरिया र फg्गसको कारण।